नेपाली यौन कथा अनलाईन : सरीता संग पहीलो चिकाई
सरीता संग पहीलो चिकाई
दिनभरिको थकाइले गर्दा राम्रो ओछ्यानको भन्दा पनि हामीलाई थकाइ मेट्न पाए हुन्थ्यो भन्ने ध्याउन्न थियो। हामी आ-आफ्नो ओछ्यानमा पल्टियौँ। कता-कताबाट मनमा दिउँसोको कुरा खेल्न आएछ। लागेको निद्रा बेपत्ता भयो र दिउँसोको बाहिर-बाहिर मात्र दलेर छाड्नुपरेको सम्झिएर भित्रैसम्म पुर्याउने इच्छा मनमा प्रबल हुन थाल्यो। सरीताको भर्खर-भर्खर जुँगाको रेखी बसेको समतल भाग, प्वाट्ट उठेको दोभान अनि कस्सिएको छाती सम्झिएर आफूलाई ठ्याम्मै निद्रा लागेन। केही समय बिरालोको चालमा उठेर सरीताको ओछ्यानमा पुगेँ। त्यसपछि सरीतासँग लपक्क टाँस्सिएर उसको मुखमा आफ्नो मुख लगेर जोडेँ। उसले एउटा हात मेरो लिङ्गतिर लगेपछि थाहा भयो, उसलाई पनि निद्रा लागेको रहेनछ भन्ने। बिस्तारै मैले पनि आफ्नो हात जाङतिर लगेँ र खेलाउन र सुम्सुम्याउन थालेँ। अब हामी दुवैको थकाइ बेपत्ता भइसकेको थियो। त्यसपछि मैले बिस्तारै आफ्नो लिङ्गलाई उसको कापेतिर ल्यान्डिङ गर्न थालेँ। भित्र नहुल्नुस् है, साह्रै दुख्दोरहेछ, दिउँसोको जस्तै बाहिर-बाहिरै गर्नुहोस् भन्ने राय सरीताले बिस्तारै कानमा व्यक्त गरी। एक पटक पस्न मात्र गाह्रो हो, पसिसकेपछि कति मज्जा हुन्छ भन्ने तिमीलाई के थाहा - मैले पनि उसको स्वरमा भनेँ। 'जति मज्जा भए पनि के गर्नु, तपाईंको त्यति लामो र मोटो छ। मैले कहिल्यै हालेकी पनि छैन। अघि दिउँसो अलिकति पस्दा त मरुँलै जस्तो भयो'- सरीताले आफ्नो स्थिति बताई। तिमीलाई साह्रो नपर्ने गरी बिस्तार-बिस्तार हाल्छु भनेर मैले आफ्नो नाललाई सरीताको तीनकुनेतिर सोझ्याएर जबर्जस्ती धक्का दिएँ।
सरीता ऐय्या भनेर छट्पटाई तर मैले त्यसको कुनै प्रवाह पनि गरिनँ र उसलाई आफ्नो ठाउँ पनि छाड्न दिइनँ। एकछिन त उसको छट्पटाइमा कुनै कमी आएन तर केही बेरपछि उसको छट्पटाइ उत्तेजनामा बद्लिन थाल्यो। तैपनि मेरो आधाभन्दा पसेन। एकैचोटि गर्दा अर्को आपत आर्इपर्छ भनेर मैले आधामा नै आज चित्त बुझाउने विचार गरी धक्का दिन थालेँ। १५ मिनेटपछि ऊ पनि शान्त भई, म पनि शान्त भएँ। 'कस्तो निष्ठुरी त्यसरी मर्ने गरेर पनि गर्नुहुन्छ ?'- सरीताले बिस्तारै भनी। 'एक पटक न एक पटक छिराउन परिहाल्यो। आज नभए भोलि, मैले नभए अरू कोहीले धक्का दिइहाल्थ्यो, त्यसमा पनि मैले त आधा मात्र छिराएको छु'- मैले स्पष्टीकरण दिएँ।
आधा छिराउँदा त आफ्नो ढाड झन्डै भाँच्चिएन, पूरै छिराएको भए त मेरो के गति हुन्थ्यो होला - भन्दै सरीताले कस्तोसँग टट्याउन पनि थाल्यो, के गर्ने होला भनी। त्यसो भए म एकछिन हातले सुम्सुम्याइदिन्छु भनेर सरीताको कापेमा बिस्तारै सुम्सुम्याइदिन थालेँ। मेरो सुम्सुम्याइबाट सरीताको दर्द मात्र हटेनछ कि उसमा उत्तेजना पनि बढ्न थालेछ। 'यही मोराले हो मलाई दुःख दिएको' भनेर च्याँठ्ठिदै मेरो कान्छो खेलाउन थाली। एकछिनपछि मेरो कान्छो लौरोजस्तो ठाडो भयो र मेरो मनमा पनि पाँच हजार भोल्टको उत्तेजना दौडिन थाल्यो। फलामले फलामलाई काट्छ भन्ने उक्ति सम्झेरै लिङ्गले पारेको घाउ लिङ्गले नै निको पार्छ भन्ने सम्झिएर म मेरी सरीतामाथि चढेँ।
आम्मै कस्तो पापी, फेरि गर्न थालेको ?'- सरीताले भनी। यसले बनाएको घाउ यसैले निको पार्छ, तिमी र मलाई मज्जा हुन्छ भन्दै मैले आफ्नो कान्छो भाइलाई सरीताको कालो गुफामा धकेलिदिएँ। एकछिन छट्पटाएपछि सरीताको दर्द बेपत्ता भएछ।
अब त ऊ तलबाट पनि धक्का दिएर आफ्नो जवानीको जोश देखाउन थाली। सरीताको जोश देखेर मैले पनि मेरो लिङ्गलाई पूरै हुलेँ र धक्का दिएँ। सरीताको टाइट पुतीमा चिक्न पाउँदा मलाई पनि एकदम मजा आएको थियो । एकछिन फेरि ऊ छट्पटाई तर मैले आफ्नो काम निर्वाधरूपमा जारी राखेँ। केही छिनपछि मेरो लिङ्ग निर्वाधरूपमा भित्र-बाहिर गर्न थाल्यो। सरीता पनि तलबाट मच्चिन थाली। अब बल्ल सरीता पूरा तरुनी भएकी थिई र उसको भावी लोग्नेलाई कुनै परिश्रम गर्नै नपर्ने भएको थियो।